Vaovao - Sodina vy tsy misy tohotra
1. PIPE STEEL TSY MISY WALLAVA
Ny fantsona tsy misy rindrina matevina dia azo antoka fa tsara kokoa noho ny fantsona mahazatra. Ny voalohany dia ny firafitra mirindra amin'ny rindrin'ny fantsona sy ny vatan'ny fantsom-pandehanana dia tena malama, ary ny faharoa dia ny vy vy tsy mahazaka hafanana sy hatsiaka avo, ary tsy hihena. Na ny fantsom-borosy matevina miolakolaka sy matevina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny dingan'ny indostrialy maoderina. Ny fantson-tsolika dia tsy maintsy mampiasa ity fantsom-pirinty matevina ity ho fitaovana fitaterana. Noho ny kalitao avo lenta dia tsy hisy ny lozam-pifamoivoizana misy solika. Fantsona tsy misy ilana azy ho an'ny orinasan-tsolika maro ny fantsona tsy misy rindrina matevina.
Ny fantsom-pirazanana tsy misy fangarony dia fitaovana fantsom-by vita amin'ny vy mahomby avo lenta amin'ny alàlan'ny sary mangatsiaka na ny fihodinana mafana. Ny fantsom-by vy tsy misy fotony dia ampiasaina indrindra hamokarana singa pneumatika na hydraulic, toy ny varingarin'ny rivotra na varingarina misy menaka, izay vita amin'ny fantsona tsy misy tohika avokoa. Izy io dia azo ampiasaina hanamboarana rafitra mekanika, fitaovana elektrika ary faritra amin'ny fiara. Rehefa mitovy ny tanjaky ny miondrika sy ny torsion dia maivana kokoa ny fantsom-by tsy misy fangarony. Izy io dia karazana vy fizarazarana ara-toekarena ary be mpampiasa amin'ny fanamboarana ny sombin-drafitra sy ny faritra mekanika. Na dia mandova ny tombony azo amin'ny fantsom-by tsy misy vy aza, ny fantsom-by vy marina dia manana ny mampiavaka azy ihany koa. Ny fampiasana ny fanamboarana marimarina ny ampahany amin'ny peratra dia afaka mampitombo ny taham-pahaizan'ny fitaovana, manamora ny fizotry ny famokarana ary mamonjy fitaovana sy fanodinana adin'olombelona. Ohatra, ny peratra fitondra mihodina, ny palitao jack sns ..., dia novolavolaina betsaka tamin'ny fantsom-by vy. Ny fanentanana sy ny fampiharana ny fantsona tsy misy valaka dia misy dikany lehibe amin'ny fitsitsiana vy, fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana ary fampihenana ny fomba fanodinana na fampiasam-bola amin'ny fitaovana. Izy io dia afaka mamonjy ny vidiny sy ny fikarakarana ora-olombelona, ​​mampitombo ny habetsaky ny famokarana ary ny fampiasana fitaovana, ary miaraka amin'izay dia manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy hampihena ny vidiny. Misy lanjany lehibe ny fanatsarana ny fahombiazan'ny toekarena.
3. PIPE vy tsy misy fangarony
Ny fantsom-by vy manokana dia azo zaraina ho fantsom-by boribory boribory boribory, fantsom-by vy miendrika telozoro, fantsom-by vy miendrika hexagonal, fantsom-by vy miendrika diamondra, fantsom-by vy miendrika octagonal, boribory vy boribory semicircle, sns afaka manao mifanaraka amin'ny sary. Manokana -Ny fantsom-by tsy misy fantsom-bika dia be mpampiasa amin'ny faritra maro samihafa, fitaovana ary faritra mekanika. Raha ampitahaina amin'ny fantsom-boaloboka, ny fantsona miendrika manokana amin'ny ankapobeny dia manana fotoana inertia lehibe kokoa sy fizarana modulus, ary manana fanoherana lehibe kokoa sy torsion, izay afaka mampihena be ny lanjan'ny firafitra sy mitahiry vy.
5. PIPE STEEL GARVANEZED
Ny galvanizing dia afaka mampitombo ny fanoherana ny harafesin'ny fantsom-by ary manalava ny androm-piainany. Ny fantson-tsavily dia manana be mpampiasa. Ankoatry ny fantsom-pifandraisana handefasana rano, etona, solika ary tsiranoka ambany hafa, dia ampiasaina koa izy ho fantsom-pitrandrahana solika sy fantson-tsolika ao amin'ny indostria solika, indrindra ny toerana misy solika any an-dranomasina, ary koa ireo heater-tsolika ary fanondranana ho an'ny coking simika fitaovana. Pipe ho an'ny cooler, mpivarotra menaka fanasan-damba araraka amin'ny arina, fantsona fantsona ho an'ny tetezana trestle, ary fantsom-pohy ho an'ireo zana-tohatra ao anaty tionelin'ny toeram-pitrandrahana